वास्तवमै मर्कामा छन् व्यवसायीहरू - Malayakhabar
होम पेज ब्लग/विविध वास्तवमै मर्कामा छन् व्यवसायीहरू
वास्तवमै मर्कामा छन् व्यवसायीहरू
हाल देश लकडाउनमा छ । असार १ गतेयताको लकडाउन निकै खुकुलो छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाल लकडाउन छ कि छैनजस्तो अवस्था छ । बजारमा मानिसहरू हिँडिरहेकै छन् । गाडी चलिरहेकै छन् । तैपनि निजी विद्यालय, उच्च मावि क्याम्पसहरू र सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् । वास्तवमा तीनै क्षेत्रमा काम गरेर खानेहरूको संख्या भने धेरै छ ।
अहिले तिनले झण्डै चार महिनाको लकडाउनका कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमाइरहेका छन् । न त सरकारले तिनका लागि केही योजना ल्याएको छ न तिनले कुनै माग अघिसारेका छन् । तिनीहरू अनुशासित बनेर धैर्य गरिरहेका छन् । रोगको भय सबैलाई छ र सबैले महामारीबाट जोगिनै पर्छ तर यसो भन्दैमा भोकभन्दा रोग ठूलो हुन्छ भन्ने होइन । मानिस रोगलेभन्दा भोकले मर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ ।
अरू देशले जस्तो हाम्रो सरकारले नै जनतालाई खाद्यान्नसहितको राहत प्याकेज दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । लकडाउनको सुरुमा केही मानिसलाई केही निकायहरूले दुई चार किलो चामल बाँडेका थिए, त्यसले मात्र हालसम्म तिनलाई पुगिरहेको अवश्यै छैन । लकडाउनका समयमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या निकै नै पुगेको छ । होला, ती सबैले लकडाउनकै कारणले मात्र आत्महत्या गरेका नहोलान् तर कारण केही त यो पनि हो ।
गत मंगलबार ट्याक्सी व्यवसायीले आआफ्ना ट्याक्सीसहित प्रदर्शन गरे । उनीहरूको माग पनि यही हो । व्यवसाय गर्न पाउनुप¥यो भनेरे तिनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । ट्याक्सी चालकहरूमध्ये केहीले ऋण गरेर आफैंले ट्याक्सी लिएका धेरै छन् । गाउँघरबाट आएका गरिबहरूले व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्न र छोराछोरीलाई शहरको स्कुलमा पठाउने सपना देखेर यस्ता व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
बैंकले तिनीहरूले लिएको किस्ताका लागि ताकिता गर्न थालेपछि आन्दोलित बन्नुपर्ने तिनको बाध्यता हो । व्यवसाय गर्न पाएको छैन, कमाइ भएको छैन, तिनले कसरी किस्ता तिर्ने ? त्यसैले तिनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । तिनले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत चाबी सरकारलाई बुझाएका छन् । निजी सवारी चलाउँदा कोरोना नसर्ने अनि सार्वजनिक यातायातबाट सर्ने भन्ने तिनको प्रश्न छ ।
उनीहरू आपूm ट्याक्सी लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । यो यथार्थ पनि हो तर यस्तो अवस्थामा तिनको ट्याक्सी लिलाम हुने सम्भावना क्षिण छ । केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना सामान्य रोग हो भन्नुभएको कुरालाई आधार मानेर तिनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘त्यसो हो भने यस्ता व्यवसायमा किन रोक ?’
कुरा ट्याक्सी चालकहरूको मात्र होइन सबै प्रकारका व्यवसायीको अवस्था उस्तै छ । ऋणविना कुनै पनि व्यवसाय चलेका छैनन् र अहिले बन्द रहेका बेला तिनले कसरी किस्ता तिर्न सक्छन् ? सरकार जनताको प्रतिनिधि वा अभिभावक हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा उसले कानमा तेल हालेर बसिरहनु हुँदैन । यस्ता समस्यहरूको समाधानमा केही न केही त सरकारले सोच्नैपर्छ ।
अघिल्लो लेख नेकपा नेताहरू गुटगत रणनीति बनाउँदै
पछिल्लो लेख मिडियामाथि साम्राज्ञीको आक्रोश
शपथग्रहण हो कि? हास्य सिरियलको रिहर्सल, राष्ट्रपतिले शपथ गराउदा प्रधानमन्त्री भन्छ: त्यो पर्दैन।
महिलाहरुले गर्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु।
कलैयामा दुईजना बालकको घाटी रेटि हत्या गरिएको अवस्थामा मदर्शामा शव फेला।
मलाया खबर न्युज डेस्क - May 18, 2021
बारा := कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ रंगपुर निवासी अब्दुल रसारका एकै परिवारका दुई जना बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा मृत शव फेला परेको छ...
युरोपियन गोल्डेन बुटका शीर्ष १५ जना दाबेदार फुटबल खेलाडी।
एजेन्सी (खेलकुद):= युरोपियन क्लब फुटबलको जारी सिजन सकिने संघारमा छ । युरोपका शीर्ष पाँच स्पेनिस ला लिगा, इटालियन सिरी ‘ए’, जर्मन बुन्डेसलिगा र फ्रेन्च...
एजमीद्वारा म्यारलिनमाथि बलात्कारको आरोप।
एजेन्सी := चर्चित अमेरिकी सिरिज गेम अप थ्रोन्सकी अभिनेत्री एजमी बिआनले अमेरिकी गायक म्यारलिन म्यानसनमाथि सनसनीपूर्ण आरोप लगाएकी छिन्। बिआनले सन् २०११ को आसपासमा म्यारलिनले...
प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट,आज सुनुवाइ हुँदै।
काठमाडौं := प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता डा...
सरकारको त्रुटिले धेरै मानिसको मृत्यु।
काठमाडाैं:= नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएयता २ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ। चैत २० गतेयता संक्रमणबाट २ हजार १ सय ८३ जनाको मृत्यु...